ओली सरकारले देश डुबायो, आतंककारी नागरिकता बाड्यो-कांग्रेस «
ओली सरकारले देश डुबायो, आतंककारी नागरिकता बाड्यो-कांग्रेस
प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७६, शुक्रबार १०:४९
भ्रष्टाचारमा सरकारको ऐतिहासिक रेकर्ड– कांग्रेस सह महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रश्न छ, ‘ के प्रधानमन्त्री न्याय अन्याय छुट्याउने व्यक्ति हो ? अड्डा अदालत, अनुसन्धान, छानबिन केही गर्नुपर्दैन ? आफना जति सबै निर्दोष, अरु सबै दोषी ?’
नागरिकता छानबिन गर– यो सरकारले गैर नागरिकलाई समेत नागरिकता दिन थालेको छ । संसद्मा नागरिकता बिधेयक बिचाराधिन रहेकैबेला गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरी नागरिकता बितरण नगरि नहुने के आपत पर्यो ?
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण उपलब्धी होइन– पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका डा. महतले हालै राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले गरेको चीन भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धीकारुपमा प्रचार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘ न यो भ्रमण उपलब्धीमुलक हो, न ब्यापार र पारवहन प्रोटोकलको हस्ताक्षर, यो सामान्य विषय हो । ’
१० करोड माग्नु गलत– सह महामन्त्री डा. महतले आउँदो बजेटमा सांसद्हरुले सिधै खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारे । नेकपा सांसद्हरुले १० करोड सिधै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाउने तयारी गरिरहेकाबेला नेता महतले आफूहरुले भने त्यसो नगर्ने बताएका हुन् ।